शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी छोडे नारायणहिटी दरवार - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
जगत नेपाल ६ महिना पहिले
सिटौला दरबारबाट सिधै बालुवाटारतिर लागे । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पूर्वराजासँगको भेटबारे विवरण दिए । गाईको प्रसंग सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीसमेत दंग परेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्रीले ‘दरबारका गाई रानीहरु जीवित रहँदासम्म पाल्न दिनु भन्ने आदेश दिए ।’
संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेपछिको प्रसंग हो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको थियो तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छोड्लान् कि नछोड्लान भन्ने संशय हटिसकेको थिएन ।
सरकारले दरबारको सम्पत्ति मूल्याङकन तथा लगत संकलनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए पनि त्यसले काम गर्न सकेको थिएन । यस्तैमा एक दिन कुसुमले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग काम गर्ने वातावरण बनाई दिन आग्रह गरे ।
कुसुम : मन्त्रीज्यू, काम गर्न गाह्रो भयो । सानो सानो कुरामा पनि दरबारका कर्मचारीमाथि जाहेर गर्नुपर्छ मात्र भन्छन् ।
सिटौला : ठीक छ म गिरिजाबाबु (प्रधानमन्त्री)सँग कुरा गर्छु ।
तिनताका सञ्चार माध्यममा ‘पूर्व राजा दरबार छोड्न तयार भएनन्, नारायणहिटीबाट ट्रकका ट्रक अमुल्य सामान निर्मल निवास ओसारियो । दरबारमा महत्वपूर्ण कागजात जलाइयो’ यी र यस्तै समाचार आइरहेका थिए ।
यही वातावरणमा गृहमन्त्री सिटौला र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच राजालाई नारायणहिटीबाट सारेर गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
सिटौला : गिरिजाबाबु संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा त गर्‍यो तर यस बारेमा पूर्वराजाको के विचार छ भेटेरै बुझ्नु जरुरी छ ।
कोइराला : ठीक छ तपाईँँ जानुस् । म दरबारका मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई फोन गरिदिन्छु ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि सिटौला दलबलसहित दरबार पुगे । उनको टोलीमा मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता मोदराज डोटेल र दरबारको सम्पत्तिको लगत लिन गठित समितिका संयोजक गोविन्द कुसुम थिए । बिहान १० बजेको कुरा हो, गृहमन्त्री सवार गाडी दरबारको पश्चिम गेटमा गएर केही बेर रोकियो । गृहमन्त्रीले आफ्नो अंगरक्षकतर्फ नजर लगाए । तर उसलाई सिटमा देखेनन् ।
सिटौला : खै त मेरा गार्ड ?
दरबारका गार्ड : दरबारको परम्पराअनुसार गेटमै ओरालिए ।
सिटौला : मेरो गार्डलाई रोक्ने आदेश कसले दियो ? राजातन्त्रको अन्त्य भइसक्दा पनि कसको आदेश ? अब नागरिक सरकारको आदेश चल्छ । म गृहमन्त्री मेरो गार्ड रोक्ने तिमी को ?
सधै शान्त स्वभावमा प्रस्तुत हुने गृहमन्त्री सिटौलाको पारो चढेर आयो । आफ्नो गार्डलाई संकेत गर्दै भने ‘हैन तिमी कसको गार्ड हँ ?’ गार्ड केही बोलेनन् । चुपचाप मोटरमा चढे । दरबारमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी पनि चुपचाप थिए ।
गृहमन्त्रीको मोटर राजा ज्ञानेन्द्र बस्ने गरेको महलतर्फ हुइँकियो ।
पशुपतिभक्त महर्जनसहित उच्च कर्मचारी र सैनिक अधिकारीका साथ सामान्य कुर्ता पाइजामा लगाएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गृहमन्त्रीको स्वागत गरे ।
सिटौला : संविधान सभा निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणालाई शान्तिपूर्णरुपमा स्वीकार गर्नु भएकोमा म सरकारका तर्फबाट हजुरलाई धन्यवाद दिन आएको । विश्वमा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा ठूला ठूला घटना भएका छन् तर तपाइँले जनताको निर्णयलाई जुन प्रकारले सहजरुपमा स्वीकार गर्नुभयो त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनु भएको छ ।
ज्ञानेन्द्र : (टाउको हल्लाएर कुरा सुनी रहे)
सिटौला : के गर्ने नेपालमा राजतन्त्रको नियति नै यस्तै रहेछ, तपाईँको कार्यकालमा आएर टुंगिनु पर्ने । तपाईँले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेकोमा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
ज्ञानेन्द्र : (सुनिरहे) ।
सिटौला : सरकारले नारायणहिटी दरबार १५ दिनमा खाली गरी संग्रहलय बनाउने निर्णय गरेको छ । तपाइँले त्यसमा पनि सदा झैँ सहयोग गर्नु नै हुनेछ । यसबीच पत्रपत्रिकामा तपाईँले दरबार छोड्नुहुन्न, बहुमल्य सामान दरबारबाट बाहिरिए र महत्त्वपूर्ण कागज जलाइए भनेर प्रकाशित समाचारबाट सरकार चिन्तित छ ।
ज्ञानेन्द्र : पत्रपत्रिकामा झूठा समाचार आएका छन् । यहाँ त्यस्तो केही भएको छैन । कसरी यस्तो समाचार आयो ? म पनि त्यसबाट दुखी छु ।
सिटौला : तपाईँले जनताको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सहयोग गर्नुभएको छ । सरकारलाई जानकारी गराई जाने बेला प्रेससँग आफ्नो कुरा राख्नु उचित हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्र : गृहमन्त्रीसँग म छुट्टै कुरा गर्न सक्छु ।
अनि हलबाट गृहमन्त्री सिटौलासँग आएको टोली बाहिर निस्कियो । शाह र सिटौलाबीच ४५ मिनेट छुट्टै कुरा भयो ।
ज्ञानेन्द्र : मसँग बस्ने ठाउँ छैन । मुमा बडामहारानी रत्न र ९४ वर्षकी हजुरआमा (सरला मानन्धर राजा त्रिभुवनकी कान्छी रानी) हुनुहुन्छ । उहाँहरुको ‘सेन्टिमेन्ट’को विषय छ ।
सिटौला : यो ठूलो कुरा होइन, समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले तपाईँको हजुरबुबा त्रिभुवन, बुबा महेन्द्र, दाजु वीरेन्द्रका पालामा राजनीति गर्नुभयो । तपाईँको कुरा बुझेर सहयोग गर्नु हुनेछ । पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा तपाइँलाई सुरक्षा र आवास सुविधा दिन सकिन्छ म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर खबर पठाउँछु ।
ज्ञानेन्द्र : मलाई नागार्जुन बस्न दिए पनि मैले बेला बेलामा आमा र हजुरआमालाई भेट्न यहाँ आई रहनुपर्छ ।
सिटौला : त्यो ठूलो कुरो होइन । मिल्छ ।
ज्ञानेन्द्र : गृहमन्त्रीज्यू, राणाहरुले राजमुकुट साथमै लिएर गएका थिए भन्ने सुनेको छु ।
पूर्वराजाले राजमुकुट हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरे ।
सिटौला : राणाहरुले मुकुट नबुझाएकाले नै आज जनतालाई उनीहरुको मुकुटबारे केही थाहा छैन । मुकुट बेचेर तिनीहरुले केही करोड रुपैयाँ पाए होलान् । सम्पत्ति सञ्चय गरेर के हुन्छ र ? छोरा नातीको पालासम्म त त्यो सकिन्छ नै । शाहवंशको श्रीपेचलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा राख्ने भनेर नै नारायणहिटीलाई राष्ट्रिय संग्राहलय बनाउने निर्णय भएको छ र यो दायित्व सरकारले पूरा गर्नेछ । यो अमुल्य सम्पत्ति इतिहासमा शाहवंशकोे चिनोका रुपमा चिरकाल पर्यन्तसम्म जनताले हेर्न पाउनेछन् ।
सुरुमा राजमुकुट आफ्नै साथमा राख्ने मनसुवा व्यक्त गरेका ज्ञानेन्द्र शाह पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजी भए ।
सिटौला : सरकारले सम्पत्ति (दरबार) को लगत तयार गर्न गठन गरेको समितिले काम गर्ने वातावरण छैन । तपाईँले सहयोग गर्नु पर्‍यो । म अहिले सहयोगीसहित हजुरको दरबार हेर्न चाहन्छु ।
ज्ञानेन्द्र : (मुसुमुसु हाँस्दै) हुन्छ हुन्छ । पशुपति (प्रमुख सचिव) गृहमन्त्रीजीलाई सबैतिर देखाइ दिनू । यहाँ मेरो गाई गोठ पनि छ मन्त्रीज्यूले त्यो पनि हेरिदिनु पर्‍यो ।
क्षणभरमै एउटा बस आइपुग्यो ।
सिटौला : हैन, यो बस केका लागि ?’
पशुपति : यहाँ चलन यस्तै छ । घुम्न आयो भने यसैमा राखेर लैजाने गरिन्छ ।
सिटौला : हैन म मेरै गाडीमा जान्छु ।
पशुपति : ए ल ल ! गृहमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै मोटर ल्याइदिनुस् ।
त्यो क्षणबारे पूर्व गृहमन्त्री सिटौलाले लेखकलाई सुनाए– ‘दरबारको चलन नै त्यस्तै रहेछ । पूर्वराजाको गाईगोठमा साँच्चै रहर लाग्दा ठूला ठूला कचौडा भएका गाई देखेपछि म दंग परेँ ।’
दरबार परिसरको निरीक्षण गरेपछि सिटौलाले दरबारका कर्मचारी, सैनिक अधिकारी र नेपाल सरकारका अधिकृतहरुको संयुक्त बैठकलाई संवोधन गरे । त्यसको मूल उद्देश्य थियो– ‘२४० वर्ष लामो राजतन्त्रको संस्कारमा हुर्किएका कर्मचारीलाई नयाँ परिवर्तनको संस्कारमा रुपान्तरण गर्ने ।’
जनताको आदेशलाई शान्तिपूर्णरुपमा स्वीकारेका कारण पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रलाई सुरक्षा र निवासका लागि नागार्जुन दरबार दिने प्रस्ताव २०६५ जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भयो । त्यही बैठकमा पूर्व बडामहारानी रत्ना र ९४ वर्षीया हजुरआमा सरलालाई बाँचुन्जेल नारायणहिटी राजदरबारभित्र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको बंगला दिने प्रस्ताव गरियो ।
परन्तु, माओवादी मन्त्रीहरु हिसिला यमी र मातृका यादवले त्यस प्रस्तावको विरोध गरे ।
हिसिला : रत्नलाई नारायणहिटी दरबारमा बस्न दिनु षड्यन्त्र हो । नौनी जस्तो बोल्ने गृहमन्त्री सिटौला राजालाई ठूलो दरबारबाट सानोमा सार्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यो कुरा हामीलाई मान्य छैन ।
सिटौला : (झनक्क रिसाउँदै) हिसिलाजी ८० वर्ष नाघेकी रत्न र सरलालाई हठात् हटाउँदा जे पनि हुन सक्छ । मानवीय आधारमा पनि हेर्नुपर्छ ।
हिसिला : ‘सेन्टिमेन्ट’को कुरा गरेर दरबारमा उनीहरुलाई राख्न मिल्दैन ।
सिटौला : ठीक छ । उनीहरुलाई तानेर दरबारबाट हटाउनुस् । मेरो प्रहरी जाँदैन ।
माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भने केही बोलेनन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बैठकमा माओवादी मन्त्रीलाई सम्झाउने प्रयत्न गरे ।
कोइराला : ‘जनताको निर्णय आत्मसात गर्दै उनी (ज्ञानेन्द्र) शान्तिपूर्वक दरबार छोड्न तयार भइसके । हामीले सानो चित्त राख्नु हुँदैन ।
हिसिला र मातृका : दरबारको अवशेष राखिरहने कुराको समर्थन गर्न सकिँदैन । हामी यसको पक्षमा छैनौ ।
माओवादी मन्त्रीले अडान छोडेनन् । अन्त्यमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजी गराउनु पर्‍यो ।
कोइराला : हेर्नुस् प्रचण्डजी तपाईहरुलाई जंगलबाट ल्याउँदा हामीले यति धेरै दिएका छौँ । २४० वर्षको राजतन्त्र हटाउँदा एउटा नागार्जुन दिन किन यति गाह्रो ?
प्रचण्ड : ठीक छ गिरिजाबाबु तपाईँ प्रधानमन्त्री हो । निर्णय गराउनुस् । म विरोध गर्दिन ।
यसरी सरकारले पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । उनकी आमा रत्न र हजुरआमा सरलालाई नारायणहिटीभित्रै बस्ने अनुमति दियो । जेठ अन्तिम साता आफैँले चलाएको मोटरमा कोमल –तत्कालीन बडामहारानी) का साथ नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए ।